Thenga i-Bitcoin ku-Paxful ngoko nangoko. Rhweba nabanye abasebenzisi abakwi-intanethi usebenzisa incoko yethu yangoku.
Thengisa i-Bitcoin yakho ngexabiso ozikhethele lona, uze ubhatalwe ngenye yeendlela zokubhatala eziliqela.
Fumana iwalethi yasimahla ye-Bitcoin yangonaphakade enyamekelwa ngu-BitGo, umboneleli ophambili weewalethi ezikhuselekileyo ze-Bitcoin.
Thatha eli thuba leNkqubo yethu yeHlakani ukuze uzenzele umzila womvuzo ozinzileyo.